Nzuzo Policy2 - Besca Industrial Co., Ltd.
Besca waya ntupu
Besca USB tree
BC3 Ladder tree
BC4 Ladder tree
Waya ntupu USB tree
U Fittings na Base
Ewepụghị efere Fittings
Arụ ọrụ na BC3 / BC4 USB tree
Aluminum Strut, USB trays na Ladder
Ndi ana-akpo US
BC1 / 2/5/6 USB tree
BC3 USB tree (H = 50)
BC4 USB tree (H = 50)
BL1 / 2/3 Steel USB Ladder
Néma 12b / 16a / 20b / 20C Steel USB Ladder
Marine USB Ladder
Néma 20C / BL4 USB Ladder Aluminium
Cover USB Ladder
BL5 / 6 FRP USB Ladder
BM1 / 2/3 waya ntupu USB tree
BM4 / 5/6 waya ntupu USB tree
BT1 / 2/3/4/5/6 USB Trunking
BT7 FRP USB Trunking
BT8 Aluminium USB Trunking
Esi mmiri ọkụ & Pressure Arịa Steel
Low Alloy High Ike Steel
High Ike & ahịhịa Steel
Abrasive Nguzogide Steel
On https: // www.bescatray.com (site ugbu a na, a ga-ezo dị ka bescatray.com), esenowo nzuzo bụ nke anyị mkpa. Nke a na iwu nzuzo page akọwa ụdị nke onye ozi nwere ike natara na-anakọtara site na bescatray.com na otú ihe ọmụma ga-eji.
Chọọ Engine Mgbasa ozi
Dị ka ọtụtụ ndị ọzọ ọkachamara saịtị, bescatray.com itinye ego na internet advertisement. Anyị n'ekwusa mmekọ na-agụnye ozi Bing (Yahoo Mgbasa ozi). Iji jirichaa online mgbasa ozi ROI na-ahụ lekwasịrị ahịa, bescatray.com etinyere ụfọdụ nsuso codes N'ịbụ ndị search engines na ndekọ ọrụ IPS na page ikiri aga.
Business Kpọtụrụ Data
Anyị na-anakọta niile azụmahịa kọntaktị data zitere site na ịntanetị ma ọ bụ web forms on bescatray.com si ọbịa. Esenowo njirimara na kọntaktị metụtara data banyere ga-nọ nanị n'ihi bescatray.com esịtidem were. bescatray.com ga hụ na nchekwa na ihe kwesịrị ekwesị ojiji nke ndị data.
Anyị ga-eji naanị gị chọpụta mmadụ dị ka a kọwara n'okpuru ebe a, ma ọ bụrụ na ị kpọmkwem kwere ọzọ ụdị nke iji, ma n'oge chọpụta mmadụ na-anakọtara site na gị ma ọ bụ site na ụfọdụ ndị ọzọ ụdị nkwenye n'aka gị:
1.We ga-eji chọpụta mmadụ mezue ọ bụla iwu ị enịm.
2.We ga-eji chọpụta mmadụ iji nye gị na ụfọdụ ọrụ unu chọrọ, dị ka iru a na-ere ahịa.
3.We ga-eji gị chọpụta mmadụ iji zaghachi ajụjụ na ị na-eziga anyị.
4.We ga-eji gị chọpụta mmadụ iji zitere gị ozi ịntanetị site n'oge ruo n'oge, dị ka akwụkwọ akụkọ na ọkwa banyere anyị n'ọkwá.
5.We nwere ike igosipụta chọpụta mmadụ dị ka achọrọ site na iwu ma ọ bụ iwu usoro.
6.We nwere ike igosipụta chọpụta mmadụ ichoputa-enyo enyo wayo, na iyi egwu ma ọ bụ ndị ọzọ imebi nke ọ bụla iwu, na-achị ma ọ bụ iwu, ma ọ bụ okwu ma ọ bụ atumatu maka Web saịtị.
Pụọ / degharịa
N'elu gị arịrịọ, anyị ga-(a) ziri ezi ma ọ bụ melite ozi nkeonwe gị; (b) kwụsị iziga ozi ịntanetị na gị email address; na / ma ọ bụ (c) gbanyụọ akaụntụ gị iji gbochie ọ bụla ga-eme n'ọdịnihu ịzụrụ site na akaụntụ ahụ. Ị nwere ike ime ka ndị a na-arịọ na ndị ahịa ọmụma ngalaba, ma ọ bụ site telephoning, ma ọ bụ emailing gị arịrịọ bescatray.com si Nkwado Ndị Ahịa ngalaba na candy@bescatray.com. Biko adịghị email gị nọmba kaadị ma ọ bụ ndị ọzọ mwute ozi.